Zimbabwe Cricket team and Squad ~ Cricket Predictions and Betting tips
Zimbabwe Cricket team and Squad
By Dovah kiin on 18:51
Zimbabwe played their first Test match against India at Harare Sports club in 18-22, October 1992.Zimbabwe cricket is administrated by Zimbabwe Cricket formerly known as ZCU. Zimbabwe is the full member of ICC with ODI and Test status. Zimbabwe's early test records were very much weak that it was not able to give a competition in the world cricket. But on the early 2000, Zimbabwe was able to give a descent rivalry with the nations like Bangladesh, Kenya Ireland and other nations.
Currently Zimbabwe is ranked 11th in T20 format by ICC and holds no rank in Test cricket.
Zimbabwe Cricket team and Squad as per August 2013
Brendan Taylor, 27
Hamilton Masakadza, 30
Chamunorwa Chibhabha, 28
Vusimuzi Sibanda, 29
Tinotenda Mawoyo, 27
Charles Coventry, 30
Malcolm Waller, 28
Cephas Zhuwao, 28
Craig Ervine, 27
Elton Chigumbura, 26
Keith Dabengwa, 32
Stuart Matsikenyeri, 30
Sean Williams, 26
Greg Lamb, 32
Keegan Meth, 25
Regis Chakabva, 25
Friday Kasteni, 24
Forster Mutizwa, 27
Chris Mpofu, 27
Kyle Jarvis, 23
Tawanda Mupariwa, 27
Brian Vitori, 22
Ed Rainsford, 28
Njabulo Ncube, 23
Prosper Utseya, 27
Ray Price, 36
Graeme Cremer, 26
Timycen Maruma, 24
Natsai Mushangwe, 21